Basikety – Tompondaka N1A: tafiditra avy hatrany ho N1B ireo ekipa mendrika | NewsMada
Basikety – Tompondaka N1A: tafiditra avy hatrany ho N1B ireo ekipa mendrika
Hiditra amin’ny dingana faharoa amin’ny lalao fifanintsanana, ny alakamisy 18 oktobra izao, ny fiadiana ny tompondaka ny N1A, taranja basikety lahy sy vavy. Ekipa 21 manerana an’i Madagasikara no hiatrika izany ao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina.
Taorian’ny dingana voalohany amin’ny fifanintsanana, N1A lahy sy vavy, natao tany Mahajanga, ny faritra Analamanga indray no handray ny dingana faharoa. Haharitra telo andro ny fifanandrinana eo amin’ireo ekipa 21, mialohan’ny hidirana amin’ny dingana ampahavalon-dalana. Hotanterahina, ny zoma 26 oktobra ny dingana ampahefa-dalana, ny asabotsy 27 oktobra ny lalao manasa-dalana ary hifarana ny alahady 28 oktobra ny fiadiana ny tompondaka nasionaly N1A, amin’ity taona ity. Ho tsaratsara kokoa ny valisoa ho azon’ny ekipa mendrika, amin’ity indray mitoraka ity, raha ny nambaran’ny TELMA, mpanohana ofisialy ny federasiona malagasy ny basikety. Lelavola 2 tapitrisa ariary no atolotra ny mpandresy ary iray tapitrisa ariary kosa ho an’ny laharana faharoa. Hahazo loka kosa ny mpilalao mendrika indrindra. Ankotr’izay, hampidirina avy hatrany ho N1B ny ekipa 5 voalohany amin’ny sokajy lehilahy sy ny 3 voalohany amin’ny sokajy vehivavy. Ho fantatra amin’ny fifaranan’ny lalao, araka izany, izay hisolo toerana ny ekipan’ny ASCB Boeny sy ny SBBC Boeny, tompondaka lahy sy vavy tamin’ny taon-dasa.
Tsara ny manamarika fa anisan’ny tanjona ato anatin’ity fifaninanana ity ny hahafahana misafidy ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena amin’ny taom-pilalaovana 2019, raha ny nambaran’ny teo anivon’ny federasiona malagasy. Amin’ny alalan’ity lalao ity ihany koa no hahafahana mijery ny lalan’ny mpanazatra ka hahafahana misafidy izay hitondra ny taom-pilalaovana manaraka.